Naxdin:Qamar suugaani oo oohin afka furtay kadib hadallo aad u xun oo hawada loo mariyay. - xog baahiye
Naxdin:Qamar suugaani oo oohin afka furtay kadib hadallo aad u xun oo hawada loo mariyay.
Qamar suugaani ayaa si xun uga cadhooday hadallo xanaf leh oo hawada ay usoo mariyeen qaar kamid ah bulshada ku xiran bartiisa instagram.
hadallada xanafta leh ayaa yimid kadib markii xaaskiisii hore ugbaad aragsan ay soo bandhigtay uur ay u qaadday Ilyaas Idris.
Qamar ayaa bartiisa instagram kusoo bandhigay qoraal uu kaga codsanayo taageerayaashiisa in aysan ku dacaayadeyn ilma la’aanta heysa.waxa uu sheegay in ilaahay uu yahay midka ilmaha bixiya,uuna aad uga xun yahay in lagu dhaleeceeyo wax uusan asaga gacanta ku heyn
AKHRISO: A hacker hacks into Tusmo's phone and posts a scandalous video.
Dhanka kale Ugbaad aragsan, ayaa hawada u marisay seygeedii hore ereyo xanaf leh kuwaasi oo loo badinayo in fannaanka uu go’aansado in asxaabtiisa usoo bandhigo dhibta heysata.
Qaar kamid ah bulshada soomaaliyeed, ayaa Qamar ku xanta in uu yahay madhaleys,hablaha qaarna ay iska ilaaliyaan inay xiriir la sameeyaan.waa markii ugu horreysay uu fannaan soomaaliyeed uu bartiisa kusoo bandhigo noloshiisa dhabta ah.
AKHRISO: Subxanallah:gabar Yar oo 10 sano jir ah oo ayeeydeed KU dishay gobalka mudug iyo sirta ka dambesay
Daawo:dagaalkii qamar suugani iyo ugbaad aragsan oo meel xun gaaray iyo qamar suugani oo xabsiga loo taxaabay kadib markii codad aflagaado ah laga duubay
DEG DEG: Ugbaad aragsan oo ninkedii hore qamar suugani Mar kale baalasha ka riftay arin halis ah sheegtay
Deg deg:Nimcaan hillaac oo arrin naxdin badan shaaciyay iyo sababta uu hargeysa uga cararay.
Deg deg:Ilkacase oo sir culus bannaanka keenay kadib dagaalkii Naciimo jokar.
Xaaskiii qamar suugani oo oohin afka furatay kadib markii ninkeda qamar suugani lagu dhag hadlay iyo sir culus
Xog sir ah: King Ck oo arin farxad ah shaaciyay iyo isha caziiz oo farxad darteed la ilmeysay.
Search Anything You Like
What happened last night inside the grand mosque 🤔
Subxanallah:Fatxiyo Cabsiiye oo diinta si xun ugu geftay.
King ck oo Soo bandhigay jacelkisa cusub ee farxiya turki iyo sir badan uu ka fashilay xaaskisii hore ee manaal beeldaajiye
Deg deg:Ilkacase iyo Sharma boy oo si xun baalasha uga rifay Dahir Calasow.
Subxanallah: qamar sugaani oo inkaar iyo caro kala duldhacay ugabaad aragsan kadib arin naxdin leh oo ay kusameysay.
Xaaskiii hore ee ck Soo bandhigtay sawirka jacelkeda cusub iyo king ck oo arin halis ah fashilay
© Xogbaahiye.com 2021 | All Rights Reserved Cream Magazine by Themebeez